i-CSA ibamba ikhempu yabesifazane kwabaphosa ngokushesha
PRETORIA, SOUTH AFRICA - JULY 17: Helen Bayne and Tumi Sekhukhune of South Africa during the South African national womens cricket team fast bowlers camp at Groenkloof Oval on July 17, 2018 in Pretoria, South Africa. (Photo by Lee Warren/Gallo Images)
i-Cricket South Africa (CSA) ibambe ikhempu yabaphosa ngokushesha e-Powerade Centre of Excellence ePitoli ngoLwesibili. Ikhempu ibanjelwe ukubheka izinga labaphosa ngokushesha kwizwe kanye nokuhamba kwabadlali kwiqembu lama-Momentum Proteas ne-Powerade National Academy.
i-CSA High Performance Manager, u-Vincent Barnes uthe: “Ukubheka esinabo kulaba abaphosa ngokushesha. Sifuna ukuqiniseka ukuthi sibanike (abadlali bezwe) ithuba elibafanele kanye nabakudingayo ukulungisela i-season ezayo futhi nabanye babadlali abancane abangenayo, ukuqiniseka ukuthi bangaziveza kwikhilikithi yezwe (uma bebizwa), Ngakho, ukubabheka, ukubheka abenzangayo kanye nokuhluza izenzo zabo kanye nokukhuluma ngendlela okuphoswa ngayo okufika nokuphosa ngebhola elimhlophe.”
Eminyakeni edlule, inani labadlali abangenayo kwiqembu lezwe likhulile ngokushesha kungena nge-CSA women’s development programme. Enabadlali abaningi angasebenza nabo kwikhempu, u-Barnes uthe yena nabaqeqeshi abakhona bafuna ukubona ukuthuthuka ekuqineni, abalungile ekuboneni isimo somdlalo kanye nokucabanga kokuthatha izinqumo okusabalele ezikhathini ezibalulekile zesimo somdlalo. Uphinde wakhuluma ngokugculiseka kokuqhubeka kokuthuthuka okwenziwe i-National Academy selokhu yavulwa kulobusika.
“Kumayelana nokulungiselela imidlalo kanye nokuqina esifuna ukubona bedlala ngakho,” eqhubeka. “Sibonile kubusika kwi-Academy, amandla ebangcono futhi kudingeka lokho uma ufuna ukuba umdlali wezwe wekhilikithi. Ngibone ukuthuthuka okukhulu kwindlela amanye amantombazane enze ngayo. Ukuba khona isizathu esikhulu kubona sokuba abadlali bezwe.”
“Kwabanye abaphosayo, kumayelana nokusebenzela nezenzo ezihambelana nomdlalo futhi kwabanye ukusebenzela izenzo kanye nokusebenzela izimo zomdlalo.”
Nabadlali abane kwalaba abangu-11 kuma-ICC Women’s ODI Bowling Rankings (u-Shabnim Ismail 2, u-Marizanne Kapp 3, u-Ayabonga Khaka 8 no-Dane van Niekerk 11), u-Barnes ucele imidlalo efanayo kwiqembu akholwa kuletha ilungelo kulaba abaphosa ngengozi emhlabeni.
“Kuhle ukuthi sinethalente kwiqembu lezwe,” eqhubeka. “Okungikhathazayo okwamanje ukuthi kwiqembu elinabadlali abane kulaba abangu-11 kuma-ICC ODI Bowlers Rankings, kumele engabe siyawakhipha amaqembu futhi benze kangcono njengeqembu eliphosayo. Sineqembu elilungile eliphosayo kodwa asiphosi kahle ngendlela engabe sibhosa ngayo.”
u-Tumi Sekhukhune, ongoyedwa walaba abadlalela i-National Academy omenyiwe kwikhempu ebekujabulele ukubizwa, wathi kuyacaca ukuthi ubheke endleleni elungile.
“Kuyathobana futhi kuletha udumo ukuba lapha neqembu lezwe kanye nabaphathi,” ephawula. “Kuyangijabulisa ukuba lapha kulendawo ngoba kuyasiza ukungikhombisa ukuthi kudingeka ngenze umsebenzi ongakanani ukungena kwiqembu lezwe.”
“Kuyathobana ukuba lapha ngoba ngikwi-National Academy futhi ukucelwa ukuba ingxenye yalaba abaphosela iqembu lezwe kulekhempu kuyangijabulisa ukucabanga ukuthi abakhethayo bakhuluma ngami. Kungenza ngizwe sengathi ngiyasondela ekufikeni kwigoli lami.”
Ophosa nge-pace kuma-Momentum Proteas, u-Shabnim Ismail uthe uthole okuningi kwikhempu emuva kohambo oluphuxile e-England.
“Akuhlezi kulula ukubuya emuva kohambo olunzima futhi kubuyelwe emsebenzini kodwa selokhu sabuya ngibe nesikhathi esihle ukubheka uhambo kanye nokubuyisela umqondo kumdlalo kanye nokucabanga kahle ngaphambi kohambo olulandelayo,” esho.
“Sisebenze kulokhu okuhle namhlanje,” enezezela. “Kuhambo oludlule abaphosayo abayidlalanga indima ngendlela ebesithanda ngayo ngakho sibuyele kulokhu okulula futhi sakhuluma kahle ngokuthi sizobuya kanjani hayi ngomzimba kodwa ngomqondo.”
“Hlezi kukuhle kulaba abancane abafikayo ukuzobona kanye nokuzwa ukuthi kunjani kulaba abaphosayo, kwikhempu ye-South Africa. Kumuntu ofana no-Tumi ukuza lapha kanye nokuzwa izinxoxo esinazo kwikhempu kuvula amehlo akhe futhi ngethemba uzokwazi ukuthatha akufundile lapha futhi akusebenzise kumdlalo wakhe kuyela phambili futhi azi ukuthi alindeleni ngolunye usuku uma naye ekwiqembu lezwe,” u-Ismail ephetha.
Nesikhwama semphumela ehlukene iqembu lezwe eliwatholile kuma-series ambalwa adlule, u-Barnes unelisekile ukuthi babheke endaweni enhle kodwa umile ekutheni sikhona isikhala sokuthuthuka kwiqembu elinamathalente.
“Ngiyajabula ngalapho iqembu elibheke khona. Iqembu engisathemba ukuthi lingathuthuka. Banabadlali abaningi abanqoba imidllao. Uma ngibheka manye amaqembu aphezulu emhlabeni, banabadlali ababili noma abathathu abanqoba imidlalo, kodwa abangashintshi. Ngathanda ukubona ukufana eqenjini lethu, sinabadlali abanqoba imidlalo, abahlanu noma abayisithupha kodwa okumele badlale ngokufana. Uma wonke umuntu edlala osukwini, abathinteki,” esho evala.
u-Moreeng ubheka uhambo lase-England u-Moreeng uzohlasela nokungafani kulandela i-Tri-Series ephoxayo i-South Africa ‘isendaweni enhle’ ngaphambi komdlalo obalulekile we-Tri-Series ne-New Zealand Injabulo njengoba i-South Africa ibheka i-ICC World T20 kulonyaka Nackerdien pleased with Proteas Women’s improved performance against England u-Luus no-Lee bagcina amathemba e-SA kwi-Tri-Series i-South Africa ibheke ukubuyela isimweni emuva kokuyiqala kabi i-tri-series Ikhulu la-Beaumont lihlela ukunqoba okuphule irekhodi kwi-England kwi-T20I yesibili i-South Africa iqonde ukusebenzisa izifundo kwi-T20 tri-series u-Kapp ucela ukukholwa njengoba i-South Africa ibheke ukunqoba umlando ngokunqoba u-Van Niekerk ocikekile ubheka ukuhlula i-England kumdlalo ocacisa nge-series